About Us - CO-fandresena (HK) Company Limited
CO-fandreseny (HK) orinasa voafetra, matihanina plastika tafo ara-nofo mpanamboatra, dia naorina mba hanolotra tsara kalitao plastika tafo boky ara-baiboly tena fifaninanana vidiny ho an'ny eran-tsena amin'ny ekipana manam-pahaizana matihanina izay manome tena miavaka fanompoana mba hanampiana ny raharaham-barotra mitombo. Ny vokatra manarona PC mitafo fanitso taratasy, PC mafy taratasy, PC taratasy poakaty, weatherproof ASA PVC mitambatra tafo taratasy, ASA synthetic resin kapila tanimanga, 3 sosona hafanana Voaro UPVC tafo taratasy, FRP taratasy etc.
Izahay ekipa matihanina sy 13+ orinasa traikefa, ireo mamela antsika mba hanolotra ny mpanjifa vokatra namboarina OEM asa fanompoana sy asa fanompoana. Tsy isika ihany no manolotra Premium vokatra tsara, ihany koa ny manome famatsiana fitantanana feno izay manome antoka mahomby fanaterana sambo. Ny vokatra azo antoka fa amin'ny 10-30 taona fiantohana mifototra amin'ny zavatra samy hafa ary samy fandefasana dia 100% nandinika talohan'ny entana.
CO-fandreseny dia miezaka hatrany hanatsara ny tenantsika mba hahabetsaka mpanjifa fahafaham-po sy manampy ny mpanjifa mba hanana vola-mahomby sy mahay ny raharaha any amin'ny tsena maneran-tany. Tsy andrinay ny nanontany sy miara-miasa aminao mba hahazoana fandresena fandresena-fiaraha-miasa.